६ महिनामा ५४ एचआईभी सङ्क्रमित थपिए
चितवन- सन् २०१९ को छ महिनामा जिल्लामा ५४ नयाँ एचआईभी सङ्क्रमित भेटिएका छन् ।
योसँगै जिल्लामा अहिले एक हजार ७६४ सङ्क्रमित पुगेको भरतपुर अस्पतालमा रहेको एन्टी रेट्रो भाइरल थेरापी सेवा केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार उनीहरूमध्ये ८८९ ले नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका छन् । अन्य जिल्लाबाट चितवनमा स्थानान्तरण भई आएका ७८ सङ्क्रमितले पनि केन्द्रबाट सेवा लिइरहेका छन् । सन् २०१८ को अन्त्यमा जिल्लामा एक हजार ६८५ सङ्क्रमित थिए ।
सन् २०१८ मा १७ हजार ११० को परीक्षण गरिएकामा १११ नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका थिए । अस्पतालमा आउने सङ्क्रमितलाई अहिले अस्पतालमै रहेको एएचएफ नेपालले सहयोग गर्दै आएको छ ।
केन्द्रका स्रोतव्यक्ति डा. युवानिधि वस्यैलाले सङ्ख्या हेर्दा घट्दो देखिए पनि खुलेर आउनेको सङ्ख्या भने कम रहेको बताए । जिल्लामा रहेका सबै केन्द्रबाट औषधि नलिने गरेका कारण उनीहरूमा आएको सुधारको विषयमा जानकारी लिन कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ । विशेषगरी भरतपुर अस्पतालमा आएर औषधि लिनेहरू बाहिरी जिल्लाको बढी रहेको उनले बताए ।
मकवानपुर, नवलपरासी धादिङलगायतका जिल्लामा रहेका सङ्क्रमित चितवन आएर औषधि लाने गरेको र उनीहरुलाई एकदेखि दुई महीनाका लागि औषधि पठाउने गरेको डा. वस्यौलाले बताए ।
तुलसीरामको पौरख – तरकारी बेचेरै छोरालाई इन्जिनीय...